China ip66 Aluminiyam hotsale factory intengiso ngqo iitshiphusi ezininzi led lens diriver 2700-6500k 30w 100W LED GARDEN UKUKHANYA abavelisi kunye nababoneleli | Kasem
ip66 Aluminiyam hotsale factory intengiso ngqo iitshiphuphu ezininzi led lens lens diriver 2700-6500k 30w 100W LED GARDEN LIGHT
Inkonzo yezisombululo zokukhanyisa: Ukukhanyisa kunye noyilo lwesekethe, uyilo lwe-DIALux evo, uyilo lwe-LitePro DLX, uyilo lwe-Agi32, uyilo oluzenzekelayo lweCAD, ukulinganisa kwi-Onsite, ukuFakelwa kweProjekthi
SLT09 Series LED Garden ukukhanya
• Phambi kokufaka izixhobo zokukhanyisa, nceda ufunde le ncwadana yomyalelo ngononophelo.
• Izixhobo zokukhanyisa kufuneka zifakwe, ziqhagamshelwe kwaye zivavanywe ngumsebenzi wombane oqinisekisiweyo ngokusekelwe kwimimiselo yendawo.
• Izibane kufuneka zihlale zifakelwe okanye zitshintshwe ngononophelo.
• Nceda ujonge amandla ombane asekuhlaleni ngokweemfuno zemveliso phambi kofakelo.
• Uhlaziyo lunokwenziwa kuphela xa umbane ucimile kwaye nesibane sipholiswe ngokupheleleyo.
• Xa ucoca isibane, cima umbane kwaye uyeke ukuba siphole ngokupheleleyo, coca isixhobo eso ngelaphu elithambileyo kunye nesicoci esiqhelekileyo se-PH esingathathi hlangothi, intsimbi engatyiwayo kufuneka igcinwe rhoqo.
• Musa ukugquma izixhobo ngezinto ezinokutsha.
• Indawo kufuneka yenziwe ngumvelisi okanye iarhente yenkonzo yakhe okanye umntu osebenza ngombane oqinisekisiweyo ukuze kuthintelwe ingozi. Iimpawu zoBubushushu T-ambient 25℃ Ubushushu bokusebenza -20~+55℃ Ukugcinwa -40~+60℃.
Iimpawu T-ambient 25℃
Ubushushu bokusebenza -20~+55℃
Ukugcinwa -40 ~ + 60 ℃
• IP66 ingangeni manzi/ubungqina bothuli/ubungqina bokudubula/i-IK09
• Imilo ye-aluminiyam ilungile xa kuchithwa ubushushu. Isithuba sesibane sinokuhlengahlengiswa ukuba sidibanise okanye sisuse i-15 degrees. Iyakwazi ukufakwa ngokuthe nkqo.
• I-Philips SMD 3030/ 5050/ Ra>70/SDCM<6 100,000 amaxesha okutshintsha umjikelo ngaphambi kokungaphumeleli
• Iyonke i-harmonic distortion(THD)<10%
• Uyilo olugqwesileyo lwesithuba solawulo lokukhanya, isibane sonke sinokufikelela kwi-T II-M, T III-M, yinzuzo yethu leyo
• Ukuphumelela uvavanyo lokungcangcazela kwe-3G
Umzekelo NO. Ubungakanani L(mm) Ubungakanani W(mm) Ubungakanani H(mm) Inkxaso yepali ububanzi
T09-15G 323 323 407 76
T09-15L 398 323 159 13mm intambo
T09-15D 323 323 302 60
T09-110G 485 485 546 76
T09-110D 485 485 329 13mm intambo
T09-110L 485 485 185 60
Cima umbane phambi kokufaka
Qinisekisa ukuba imodeli, i-voltage elinganisiweyo kunye ne-wattage iyafana kunye neeparitha zoyilo
Jonga iinkcukacha zocingo, Qhagamshela ucingo,Ngesidibanisi esingangeni manzi, qhagamshela ucingo lwe-L/N lwesibane sesitrato kucingo lwe-L/N lombane wesixeko.
1. Faka ukukhanya kwisiqu sokukhanya
2. Lungisa isikrufu somqheba
3. Jonga ukufakwa kwesibane ukuba sikwinqanaba okanye hayi.
4. Lungisa i-engile efunekayo.
5. Khangela i-screw yokubamba igxininise okanye hayi, ukuba ikhululekile, kufuneka iyenze ngokuqinileyo, i-torque yi-16NM.
Ngaphambili: Iwaranti yeminyaka emi-5 yangaphandle engangeni manzi kunye nesibane seNtendelezo esikhokelela ekukhanyeni kwegadi kwipaki yomhlaba
Okulandelayo: UkuKhanya okuPhakamileyo okuDityanisiweyo okuPhakamileyo 100W 200W 300W Ngaphandle Konke kwisibane esineLed esiLayitayo seSolar
Izibane zeSolar Street izibane zangaphandle 6500K wi...
Ukukhanya koDonga lwaNgaphandle lwangoku 30W i-LED yoDonga Sconce A...
I-smd yale mihla yeSolar Led Isibane sesitalato sangaphandle L...